Ividiyo kaGqr Plandemic UJudy Mikovits luhlobo lomsitho wama-201 uhlobo lweendaba zomgunyathi (ividiyo): UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	11 Meyi 2020	• 30 Comments
umthombo: ovela kwi-windows.info
Umele ukuba wambona, uxwebhu lwe-Plandemic yenenekazi elinguGqr. Iifowuni zikaJudy Mikovits. Kuthiwa uvalelwe iintsuku ezininzi kwaye wabanjwa ngaphandle kwetyala. Emva kokukhululwa kwakhe, uza nazo zonke iintlobo zamabango malunga neentsholongwane kunye nokugonyela amalungelo awodwa awenziwa nguGqr. UFauci kuthiwa wayesetyenziselwa ukwenza ubugebenga kuluntu.
Ngubani yena Isiganeko se201 ukusuka kwi-Johns Hopkins Institute, bayazi ukuba ukulwa iindaba ezingezizo kwakuyinxalenye ebalulekileyo yesifo se-coronavirus bhubhane. Sitsaliwe.
Eyona ndlela ibalaseleyo ekugqibeleni yokubulala inkcaso kukuqalisa ibali lobuxoki elijongeka lincamile kwaye lithembekile, kuba umlingisi okhokelayo umane eza nebali “elilungileyo”. Kodwa okwangoku i-Forbes iyayifaka Eli nqaku libanzi IMikovits inokuba lilungu elilwa nokugomela. Inokuba yinyani, kodwa inokuba njalo ukuba inenekazi likubhadali likaBill Gates ukwenza oko ndikuthethile amaxesha amaninzi apha: dlala umdlalo ophethelweyo (obambeleyo).
Kwimeko yenkcaso elawulwayo, iibhombu zihlala zakhiwa zaya kutsho kabini ezantsi. Ndikuve ngoku ucinga: “Ah, Vrijland, yeka ukungalawuleki kwakho okuphikisayo!"Uxolo kakhulu, kodwa ububonile na ubungqina obucacileyo obubonisiweyo - ngaphandle kwento yakho yokuba uzive ucaphukile? Akunjalo? Oko kuyothusa. Kuya kufuneka ukothuse ukuba inenekazi sele lifumene uninzi lweendaba kunye nokuqwalaselwa kwimidiya yoluntu.
Ngokukodwa, eminye imithombo yeendaba ikhuthaza ngokubonakalayo kwaye unokubona ividiyo isabelana ngokuzimisela kwi-Facebook nakwamanye amajelo asekuhlaleni. "Kulungile, yintoni ephosakeleyo ngaloo nto?"Akukho nto iphosakeleyo kuloo nto, ukuba bekungenjalo ukuba bendilumkisile amaxesha amaninzi malunga nobukho bunye Umkhosi omkhulu wamajelo eendaba. Kwaye ukuba loo mkhosi unokukunceda ukumisela, baya konwaba ukwenza njalo. Ukuba ke ukubonakaliswa kwepenshini elawulwayo kulandelayo kwaye unikelwe ubungqina kuyo, banokukukhaba.
Inxalenye yoMsitho wama-201 ukulinganisa yayikukuba iindaba ezingeyonyani kufuneka zidityaniswe. Ungayicwangcisa njani oku? Ngokwazisa iindaba ezingeyonyani kunye nokubeka esweni ukuhanjiswa kwayo (iNkcukacha eziKhulu) kunye nokulinganisa ngokuchanekileyo imiphumo kunye nokubona ukuba ngubani owenza okanye angaphenduli kuyo. Iinkqubo zeDatha eNkulu zinokulinganisa impendulo yakho kwaye zijongisise impembelelo yentlalo esekwe kwiminxeba yakho kunye nokujonga esweni okwenzekileyo kwifowuni yakho (ezenzekelayo ngeencwadi ze-AI).
Siphinda singqina isicwangciso esiliqili sokhuseleko, apho uninzi lwabagxeki lunokubanjiswa kulo mgibe, ukuze bathi kungekudala "Andikholelwa kwanto-ukuba ayiveli kwimithombo yeendaba ngokubanzi".
Uludwe lwekhonkco lovimba: forbes.com
I-QAnon inetha lokukhusela: i-PsyOp ehlakaniphile ukujonga abacaluli abaziintloko
Ukuphindaphinda: I-5G kunye ne-corona ayinanto yakwenza nomnye!
tags: 201, eyona, lawulwa, Dr., isiganeko, olungeyonyani, Fauci, eziziimbalasane, lawulwa, Judy, IiMikovits, iindaba ezibuxoki, iindaba, nenkcaso, nenkcaso, Ubhubhane, le, yokuzonwabisa, indlela
11 Meyi 2020 kwi-15: 20
Yintoni i'mikovits 'CV? Ngaba ubizwa ngokuba nguMikovits?
Ke ndiyazazi ngokwaneleyo. Bahlala bekhona, boyikeka!
11 Meyi 2020 kwi-17: 45
idd mikowitz, kaufman ... mandingathethi kakhulu
11 Meyi 2020 kwi-18: 15
11 Meyi 2020 kwi-15: 26
Yindlela emdaka kodwa inobukrelekrele bemfazwe. Bendikade ndinethemba lokuba uQ (kunye noTrump) uya kulichitha ilizwe elinzulu. Kungenxa yokuba ndiyivakalisile le nyaniso, kodwa yajika yaba yi-disinfo, ndawa ngokupheleleyo emgibeni kwaye oko kuthetha ukuba yonke into endiyithethayo ngoku iyagculelwa. Ke kubaluleke kakhulu ukukhomba abantu abavuka nje baye kwindawo yemigodi ye-disinformation.
Ndicinga ukuba uAndrew Kaufman uyathembeka, ndiyathemba ukuba andiphazami kwakhona…
11 Meyi 2020 kwi-17: 11
Uxolo, kodwa konke odinga ukukwazi malunga nokuhlela okwenziwe kwi-intanethi luye lwacaciswa kakuhle kumanqaku aliqela apha kwiwebhusayithi, ngenxa yoko akufuneki uhambise umfundi kwamanye amajelo ngokwakho. Awazi ukuba olo lwazi luxubekile ne-disinfo.
Konke okufuneka ukwazi:
11 Meyi 2020 kwi-17: 25
UAndy Kaufman ucacisa kwikhonkco le-2 ukuba intsholongwane yahlukile kubachwephesha bangaphandle abaqhelekileyo. Ithiyori ye-ger vs terrain. Iintsholongwane azikaze zahlukaniswe, nokuba yile ntsholongwane, ngenxa yoko iimvavanyo azichanekanga, njl Nangona ikhonkco kwitekhnoloji yokuhlela ye-CRISPR ichaza yonke into malunga nogonyo, malunga nokuba ziyintoni na iintsholongwane, ndifumana ulwazi malunga IKaufman ifanelekile. Ngaphandle kokuba ngummeli we-disinfo, kodwa andicingi ukuba unguye.
11 Meyi 2020 kwi-17: 48
Kulungile, ke ndiyakufunda
11 Meyi 2020 kwi-19: 34
Ndicinga ukuba ukulungele kungekudala, ngelishwa. Ifakwe kwiiyure ezi-2 zaseLondon udliwanondlebe. Kubonakala kuyinyani nakum. Ihlala icaphukisa kakhulu. Kungenxa yokuba ubonakala ngokuqinisekileyo ekholekile.
11 Meyi 2020 kwi-23: 06
Umphefumlo kaBjörn Eybl oBangela ukugula usekwe kwimithetho yendalo kaGqr Hamer yendalo efundiswa yiBiologika Nederland. Incwadi ithi oku kulandelayo malunga neentsholongwane, umkhuhlane kunye neengxaki zokuphefumla (eyona nto ibeka ubomi bakho esichengeni se-corona ngonyango oluqhelekileyo).
Ukuza kuthi ga namhlanje, akukho ntsholongwane ifunyenwe ngqo. Iintsholongwane zifunyanwa ngokungangqalanga ngokubopha okanye ngokungabophisi iiproteni kwezinye iiproteni. Akukho bungqina buqinisekileyo bokuba intsholongwane kuthiwa ibangela isifo. Ngokungathandabuzekiyo, inani elikhulu leeproteni ze-protein (i-globulin) zifumaneka egazini kunye nolunye ulwelo lomzimba. Ezi glbulins zifana nokubizwa ngokuba 'ziintsholongwane'. Iswekile inokusebenza kunye neeproteni ukwakha izicwili ezonakalisiweyo ze-ectodermal kwisigaba sokuphilisa.
Kwonyango oluqhelekileyo, umahluko wenziwa phakathi 'kwengozi eyingozi, umkhuhlane wokwenene' kunye 'nomkhuhlane ongenabungozi'. Ii-syndromes eziqatha zithathwa 'njengomkhuhlane wokwenene', iinkqubo ezikhaphukhaphu zigxothwa 'njengosulelo lomkhuhlane' okanye 'ukubanda'. Ngokombono wemithetho yemvelo yendalo, sijonga kuphela iimpawu zesigulana:
Intlungu yeLimb = ukuxabana kokuzithemba, isigaba sokuphilisa
Ubanda obuqhelekileyo = ukunuka okanye ivumba lokungqubana, isigaba sokuphilisa
Ukuqina komqala = ukungafuni ukuginya okanye ukutshiza okuthile, isigaba sokuphilisa
I-Larynx = isoyikiso okanye ukungqubana kokuthetha, isigaba sokuphilisa
I-Avian, iihagu, kunye nomkhuhlane omtsha yimikhankaso ye-WHO.
'Kwosulelo lomkhuhlane', ezinjengobhubhani, iyeza eliqhelekileyo lisebenzisa iindlela zonyango ezinje ngeTamiflu okanye iRefnza (iseli yokuphefumla cell ethintela imithambo yolusu), ugonyo, kunye ne-hypnosis enobunzima.
Ingxabano: Inkundla yexhala yokuxhalabisa ingxabano (ukusebenza kwamadoda, ukuhlasela) okanye ukungqubana nokoyika uloyiko (ukuntywila umfazi, ukurhoxa). Oku kuxhomekeke dexterity, inqanaba lehomoni kunye neengxabano zangaphambili. Abantu bayoyika ukuphulukana nomda wabo (umzekelo, iqabane okanye umsebenzi) okanye indawo kwindawo (umz. Isikhundla okanye isikhundla).
I-Tissue: I-Bronchial kunye ne-windpipe mucosa, iplate epithelium, i-ectoderm
Ukuxabana Kuyasebenza: Ukupheliswa kweselula kwe-bronchial kunye ne-trachea mucosa, kuhlala kungaziwa.
Ingqondo yebhayoloji: Icandelo lokuwela umnqamlezo lonyusa idikethi Ngenxa yoko, umoya ongcono kunye nangaphezulu unokufakwa ngaphakathi kwaye uphefumlelwe ukukhusela ngokungcono intsimi.
(Kwizilwanyana, uhlengahlengiso lwebhayoloji luyabonakala. Kubantu ngokufuthi ayibangelwa kukuba ukungqubana kwethu kuqhelekile ngokwengqondo kwaye ngenxa yoko uhlengahlengiso lwebhayoloji alunantsingiselo. Nangona kunjalo, imizimba yethu isabela njengasezilwanyaneni. Ingqondo yethu ayazi mahluko phakathi kongquzulwano lwebhayoloji kunye nengqondo. )
Inqanaba lokuphilisa: Ukwakhiwa ngokutsha kwe-bronchial mucosa kunye nokudumba okubangela ukuqina kwesifuba kunokuhamba kunye nokukhohlela kunye nomkhuhlane.
Ezi ngxabano zingasentla zinokubangelwa ziingxelo zeendaba kunye namanyathelo. Ngokunciphisa amanyathelo, ezi zingxabano zinokusonjululwa kwaye abantu banokugula.
Phantse zonke izifo zivela ngaphakathi ngaphakathi ngenxa yeengxabano zengqondo ezibangela uhlengahlengiso lwebhayoloji yomzimba (ukwanda okanye ukuncipha kweeseli okanye ukulahleka komsebenzi). Olu hlengahlengiso lulungiswa ngoncedo lwezinto ezincinci (ukhuko kunye neentsholongwane zokungunda ziqhekeza iiseli, iibacteria kunye 'neegciwane' zakha iiseli) eziveliswa yimizimba yethu. Ukukhuphela izinto zezi: ityhefu (umzekelo: ityhefu yokutya), umatshini (umz. Ukwaphula ithambo) kunye nemfuzo (umz. Down Down). Ngokudibeneyo ukuba nesifo kubangelwa kukungqubana okuhlangeneyo onakho. Amanyathelo lawo aluncedo kuba ungcoliseko njengoko sifundisiwe aluchanekanga. Amanyathelo lawo ayingozi kuba anokubangela ingxabano kwaye ke kukugula. Abo basemandleni bafuna ukuba sikholelwe ukuba ungcoliseko kunye nezifo zivela ngaphandle kwaye sinomzimba amajoni omzimba anenkumbulo yokuphelisa intsholongwane ehlaselayo. Oku kuvumela ukuba banikeze isisombululo sangaphandle. Isitofu sokugonya abafuna ukuhlanganisa ubuntu ngeArtificial Intelligence.
12 Meyi 2020 kwi-11: 08
Ngaba le ncwadi yabhalwa ngaphambi okanye emva kokuba kufumaneke itekhnoloji yeCRISPR? Kuba oko kusivumela ukuba sijonge kancinci ngakumbi kwinqanaba le-DNA kunye ne-RNA.
12 Meyi 2020 kwi-11: 43
Incwadi ethi Soul Causes of Diseases yapapashwa ngonyaka ka-2010.
UGqr Hamer wafumanisa imithetho yemvelo yendalo ngasekupheleni kweminyaka yoo-70.
Ndiyazibuza ukuba ngaba kufanelekile xa iteknoloji yeCRISPR ifunyenwe ngokwemithombo esemthethweni. Phantse lonke ulwazi luye lwakhangelwa. Mhlawumbi obu buchule babukhona ngaphambili kunentetho esemthethweni.
12 Meyi 2020 kwi-13: 53
@Martin, uphononongo olunomdla ikakhulu ngokubhekisele kwi-RNA / luciferase. I bet le yinxalenye yesitofu sokugonya esitsha. Ngelishwa andiboni uphando olupheleleyo, lixabisa imali.
Indlela ye-IncPRINT (kwiseli-protein-ukusebenzisana kwe-RNA) yohlula le mingeni ngokusebenzisa i-luciferase ebonakalisiweyo ebambekayo kwi-R2 emakiweyo ye-RNA yomdla ngeprotheni yengubo ye-MS2 (MS2CP) . Ukuba ukudibana phakathi kovavanyo lwe-RNA kunye neprotein yovavanyo kwenzeka kwiseli, kulinganiswa ngokukhanyisela kulandela ukuvavanywa kweeseli kunye nokuthintela iproteyini ebekiweyo.
12 Meyi 2020 kwi-16: 16
+ Ukukhanya okuluhlaza 🤔hmmmm
I-GreenLight Biosciences inyusa i- $ 17m ukuya kwi-ramp yemveliso ye-mRNA yovavanyo lwe-COVID-19 lokuvavanywa
I-Lucifase ligama eliqhelekileyo leklasi ye-enzymes ezihlala zibangela i-bioluminescence kwindalo. Igama lisuselwa kuLusifa, okuthetha ukuba "ngumkhweli wokukhanya". Owona mzekelo waziwa luciferase ovela kwi-glowworm Photinus pyralis. Ekuphenduleni kwe-luminescent, ukukhanya kuveliswa yi-oxidation ye-luciferin (i-pigment) kunye ne-adenosine triphosphate (ATP).
12 Meyi 2020 kwi-18: 14
ngokucacileyo ifundwe kunye neSalmon.
iinyosi wabhala wathi:
14 Meyi 2020 kwi-20: 51
Incwadi ethi Soul Causes of Illness inokukhutshelwa simahla njengencwadi ye-E evela kumguquleli: https://zielsoorzakenvanziekte.be/gratis-download-boek-zielsoorzaken-van-ziekte/
UMarcel Korver wabhala wathi:
11 Meyi 2020 kwi-16: 17
Nceda unikeze ulwazi olungasemva malunga nengxelo yakho malunga noGqr. UJudy Mikovits, kuba ulingqina elibaluleke kakhulu ngokunxulumene norhwaphilizo ngaphakathi kwishishini lokugonya kwaye uhlala enabantu abaninzi ababalulekileyo abanjengoRobert F. Kennedy, Del Bigtree, uGqr Andrew Wakefield njl. ibali aliyonyani !!!!
11 Meyi 2020 kwi-17: 06
Ukungazi oku ukuba ibali lakhe aliyonyani okanye ukuba iindudumo ziyazi kakuhle ukuba ibali aliyonyani, kodwa nceda ukuzalisa iminatha yokhuseleko yenqanawa enkulu yokhuseleko ukuntywila wonke umkhosi, ukuze iinkampu zemfundo ephinde igcwaliswe okanye abantu bazakucinga ukusukela ngoku "Well never mind thatgxeka, bazokwazi ngcono"
12 Meyi 2020 kwi-08: 21
Ke le yeti enkulu yokhuseleko kuba u-Robert F. Kennedy usebenze iminyaka kwaye u-Del Bigtree we-Highwire wenze umsebenzi olungileyo. Ewe sinokuthi sibuze yonke into, kodwa isiphumo somsebenzi wabo njengeVaxxed kukuba ngokwenene izigidi zabantu ziye zaphuma.
Ukuba le iyinenetha yokhuseleko, ke le yenye yezona zinto zibalulekileyo.
12 Meyi 2020 kwi-11: 11
Ndiyanceda ndiyathemba ukuba ayisiyiyo, kodwa masibe sijongile.
11 Meyi 2020 kwi-17: 14
Yazi, anditsho ukuba ukhuseleko lwe-pawns ayinakuthetha inyani. Anditsho ukuba ndilugonyo. Into endiyithethayo kukuba isicwangciso sobuchule bokhuseleko sihlala sisiqhelo 'sokuzinyanzela ngenyaniso', kodwa kukuba kukho ibhombu kumazantsi aphantsi.
Kule vidiyo yesiketshi ndiyacacisa:
12 Meyi 2020 kwi-08: 22
Siza kubona ukuba kukho iphantsi kabini okanye hayi ... masithembe
UGerke Teitsma wabhala wathi:
11 Meyi 2020 kwi-18: 10
eli nenekazi libanga ukuba libandakanya intsholongwane kaGawulayo. bebodwa .. oko kuyabetha. ekrokrela ukuba kuye kwanyanzeleka ukuba awugcine umlomo kodwa ngoku uvunyelwe ukuba athethe.
11 Meyi 2020 kwi-19: 50
Okomzuzwana, abayikhathalelanga iinyani okanye inyaniso. Oku akubalulekanga. Ukuba banazo naziphi na iinyani okanye iinyani konke, kujongwa kuphela ukufihla ukuthembeka kwabo kwisikram sabo. Eyona njongo iphambili ivela kwi-Hen, Confusion, njenge
abantu abaqhelekileyo Abadideki, abasakhumbuli ukuba mabakholelwa ntoni na, oku kukhathaza ubuchopho babantu abaqhelekileyo, amakhoboka. Umntu okhubazekileyo akenzi nto kwaye uyaziphilisa. Yile nto kanye bayifunayo. Yiyo loo nto ukudideka kubhetele kubo kuba banokuhlala bejika ngokuhamba kwexesha bashiye umva njlnjl. Njl... Ukuba bangabanjwa kukuziphatha kwabo okugwenxa, njengamabhele.
Kungenxa yoko le nto uhlala ubona amakhwenkwe amaninzi eskripthi esitsho oku, enye inkwenkwe ithi loo nto kunye nenkwenkwe ithi njalo.
11 Meyi 2020 kwi-20: 17
Ngqo .. yindlela yokulutha ... "Ndingajonga phi, intloko yam ididekile"
Yiloo nto kanye xa ingqondo yakho engaphantsi kokuqonda inokulungiswa.
12 Meyi 2020 kwi-13: 02
Isihloko osaziyo sasiza, somelele kakhulu.
Wonke umntu ubalekela kwi-bitchute, iPied Piper yeHammering ephendula ngaphakathi kweyure ukuba kukho into engalunganga ngokulayisha oyenzayo. (Njani?)
Kukho wonke umkhosi oza kukunceda kakuhle!
Ngokuhlwa ndibambe izandla zam kwi-balcony yakho nonke ingasentla!
W Hörchner wabhala wathi:
12 Meyi 2020 kwi-13: 24
Ngokwayo, inqaku likaForbes linokujongwa njengento yokusasaza. Yonke into oyifundileyo kufuneka uyikholelwe okanye uyithembe ukuba iyinyani. Ukuba ufunda kwezinye izalathiso kunzima ukufumanisa ukuba ingaba inyani iyabhalwa na okanye hayi.
Umzekelo, kuyatshiwo ukuba ebezakuzixela yena endaweni yokubanjwa (ekhaya). Ukuba ukhangela kuGoogle google uya kufumana kwakhona iindaba ezichaseneyo.
1) https://abcnews.go.com/Health/Wellness/chronic-fatigue-researcher-jailed-controversy/story?id=15076224 Ubhala ukuba ubhalisile ngoLwesibini.
Eli nqaku leendaba lapapashwa nge-2 kaDisemba ngo-2011.
2) https://mynews4.com/news/local/judy-mikovits-turns-herself-in ubhala ukuba ubhalisile ngoMvulo.
Inqaku leendaba lapapashwa nge-29 kaNovemba ka-2011. Ividiyo yeendaba ke ibonisa ukuba wakhululwa kwangolo suku, ayonyani nezinye iingxelo zokuba ubanjiwe iintsuku ezininzi.
3) https://www.sciencemag.org/news/2011/11/controversial-cfs-researcher-arrested-and-jailed OoSheriffs eVentura County, California, babambe uMikovits izolo ngezityholo zokuba uyimbangi evela kwezomthetho.
Eli nqaku lapapashwa ngoMgqibelo, nge-19 kaNovemba (ngeentsuku ezili-10 kwinqaku le-mynews4).
Izolo ke ibe kungoLwesihlanu we-18. Isenokwahluka kwimiyalezo emibini edlulileyo. Andifumanisi ukuba kukho izinto ezininzi ezifana nokubanjwa kwaye ke ndixele ingxelo ngokuzithandela.
Inqaku elikwiSciencemag.org (https://www.sciencemag.org/news/2020/05/fact-checking-judy-mikovits-controversial-virologist-attacking-anthony-fauci-viral#) ukuphendula okwathethwa nguMikovits:
UMikovits: Ndiligorha ejele, ngaphandle kwezityholo.
Igqwetha lesithili kwidolophu yase Washoe, e Nevada, lafaka isimangalo ngolwaphulo mthetho ngaku Mikovits emmangalela ngokungekho semthethweni ngokuthatha idatha ye khomputha kunye nepropathi enxulumene ne WPI. Ezo zityholo zichithwe, ngokuyinxalenye yeengxaki zomthetho awayejongane nazo owayengumqeshi wakhe. '
Kwinqaku le-3 ithi, phakathi kwezinye izinto:
'Isithethi se-Ofisi yeWashoe County uSheriff uxelele i-ScienceInsider ukuba ayizikhuphi siqinisekiso, kananjalo nesebe lamapolisa iReno okanye iSpark. Yatsho ukuba isenokuba yenye yearhente ezininzi zomdibaniso eWashoe County. '
Kubonakala ngathi ayicacanga yonke loo nto. Ukongeza, ngokokubona kwakhe (kwaye ezo zityholo zarhoxiswa kamva), wabanjwa ngaphandle kwezityholo. Andicingi ukuba le yindawo engaqhelekanga. 'Kwifilimu' ukwabonisa ukuba yayihlobene nokubiwa kwempahla.
Kuyasilela ukutsho ukuba iifoto zesitokhwe kunye / okanye imathiriyeli yefilimu yeqela le-SWAT yasetyenziswa engenanto yakwenza nokubanjwa. Oku kwenzeka kumgca wendibano kwimidiya. Sika, uncamathisele kwaye udale ebomini. Kwaye yonke into oyibonayo kunye / okanye ufunda kwimidiya ijolise ekukunikeni ukuziva okuthile. Kukwanjalo nakwiinkqubo ezinje ngeZembla nkqu neValuation Service. Jonga umfanekiso ongaphezulu kwinqaku leForbes. Ukuba oko akwenziwanga ukwenza imvakalelo ...
Ukujonga okwenyani, ukungasebenzi ... amagama asetyenzisiweyo ukubonisa ukubhala okanye ukuthetha inyani. Njengoko 'umntu ocinga iyelenqe' yibhokisi enika isimangalo esingalunganga. Lonke icebo.
Ndiyakholelwa ukuba uninzi lokucinga kwethu lusekwe kwinkolelo, ekuqinisekeni nasekuthembeni. Yintoni eyinyani komnye, enye kufuneka iqine njengenyaniso. Kwaye yintoni ithiyori yethiyori yomntu omnye iyinyani komnye. Yintoni ubulumko emntwini omnye obuphakathi komnye.
ClairVoyance wabhala wathi:
17 Meyi 2020 kwi-05: 07
W Horchner, enkosi ngekhonkco lakho kunye nezimvo zakho.
Okwangoku kufuneka ndijonge iilinki kodwa ndiyabona ukuba niyazi ukuba kuhanjwa njani kuhanjwa.
12 Meyi 2020 kwi-15: 54
Ngoku iindaba ezimandundu, ngethamsanqa uGreta ubuyile kwakhona KUCH😷
12 Meyi 2020 kwi-19: 06
Nasi isiqinisekiso senxalenye enkulu yintoni awayeyibiza uMartin iminyaka. Kwaye isiqinisekiso esihle kakhulu sisiphelo, imovie ihlala imizuzu eli-19, kodwa imizuzu emi-3 yokugqibela yabo bonke abafundi kunye nokubambisana be-IMBers bathi bye bye, ngokuchasene nento ocinga ukuba unayo ngoku. Ewe ewe nakusapho lwakho. Ngomhla omnye uye waba yinto engaqhelekanga kwiinkosi zakho. Kwaye ke ufumana ikamva njengawo wonke umntu. Mhlawumbi le ndoda iza kukunika ukuqonda. Nangona isenokungavumi, kuba ubambelele kwiwebhu yakho. UMartin ungomnye wabambalwa abalwela inkululeko yokwenene. Enkosi ngayo yonke imizamo yakho. Nangona ii-IMBers zisacinga ukuba angamagorha kwiinkosi zawo. Yonke into iza esiphelweni.
17 Meyi 2020 kwi-04: 59
Nazi ezinye iinkcukacha ezivela kuTony Heller;
« Ukuhlaselwa okukhulu kwiwebhusayithi uMartin Vrijland, kodwa siza kuqhubeka!
Ixesha lotshintsho olukhulu kunye nokujika okukhulu: sayina uxwebhu lwezikhalazo »
Utyelelo lulonke: 2.565.637
Uvukelo op Amawaka abantu abakwiDama Square bahlawula uqhanqalazo okanye bazenzele ngasese eGeorge Floyd engaziwa mntu?
Cubungula op Amawaka abantu abakwiDama Square bahlawula uqhanqalazo okanye bazenzele ngasese eGeorge Floyd engaziwa mntu?
Riffian op Ngaba ubunzima bukaTrump besiya e-China ukuqala kokuwa kweedola kunye nokuwa kwezoqoqosho?
SandinG op IMinneapolis UGeorge Floyd Amapolisa Obuleleyo Indlela yokuDodobalisa iMfazwe yaBemi?